दामिनी भीर भन्दा जेठो त्यो अङ्कुशे भीरले पढाएको पाठ – JanaSanchar.com
संबाददाता : मोनिका गुरुङ	प्रकाशित मिति: (२०७५ पुष ११, बुधबार) १४:२९
भएभरको जिज्ञासा र कौतुहलातालाई संगै लिएर पोखरा महानगर पालिका वडा न १६ को गर्लांगमा जन्मिएछु म । अत्यन्तै सोझो, मेहेनेती,मृदुभाषी र फौजीगुरुङको छोरी भएर त्यो पहाडि बस्तीमा जन्मेको मैले जिबनमा बिभिन्न पाटाहरु नियाल्दै तिनै पाखा र बाटाहरुमा मने पाठोसंगै उफ्रिदै हुर्किए । मेरा दामाली कोइ थिएनन गाउमा अर्थात हाम्रो घरमा म जन्मेको बर्ष अरुको घरमा बच्चा नै नजन्मेको रैछ ध्यैत ! भन्न थाल्यो मेरो उरंठ्याउलो दिमागले बयश्क भएपछी । मैले यसो भन्नु स्वाभाविक हो त्यो उमेरमा साथिभाइको धेरै महत्व हुन्छ तर मेरा भने कोहि थिएनन ।
घरको कान्छी छोरी मैले साथि नहुनुको नमज्जा त बेहोरेको थिए तर दाइ दिदि र उनीहरुको साथीहरुसंग संगत गर्ने मौका भने मिल्यो । ज्यादै जिज्ञासु मैले उनीहरुबाट सधै सबै प्रश्नको उत्तर त पाउदिन थिए तर पनि मेरो उत्सुकता भने घट्नुको सट्टा उमेरसंगै बढ्दै गयो । तेतिबेला स्कुल पढ्नेहरु पनि बिदाको दिन जंगलमा टाढा टाढा घाँस दाउरा काट्न जान्थे । घाँस नचिन्ने र थोरै ल्याउने भएकाले ल हेर त यसको भारी ! अङ्कुशे भिर गएर ल्याएको भनेर खिस्याएर मज्जाले हाँसेर थकाइ मार्थे बिसौनामा सबैजना। अब यो जिज्ञासु कीरालाई भेट्टायो त्यो अङ्कुशे भीरको भुतले । त्यो भीर नहेरेसम्म मेरो मनले शान्ति पाउने भएन । दिदिहरुलाई सोधौ जाने होर भनेर झन् जिस्क्याउलान भन्ने डर उनीहरुको कुराबाटै बुजियो कि म एक्लै तेहा जान सक्दिन, नराम्रै तरिकाले खड्कियो दामलिको अभाव फेरी पनि ।
चैतको महिना थियो जंगलमा पात पतिङ्गर सबै सुकिसकेका थिए मान्छेहरु घाँस दाउरा गर्न जंगल पनि तेती जादैंनथे । घरमा दुहुना भएकाहरु एकादुई जान्थे । एक दिनको कुरा हो कुनै साथि नभेटेपछि छिमेकी दिदीले आज म संग बन जाम है ‘मानी’ (मलाई गाउमा यहि नामले चिन्छन्) भन्न आउनु भयो म जोकोर फाल्टु दंग हिडिदिए, ‘मेरो खासै काम हुदैनथ्यो’। ति दिदीले बाटोमा त केहि भनिनन् तर करिब दुइ घन्टा हिडिए पछि पो ‘मानी यी यहि हो अङ्कुशे भीर’ । तेती बेलासम्ममा आमाले उता गाउँमा मेरो अनुसन्धान थाल्नुभाथ्यो(आमाले थाह पाए गालि गर्नुहुन्छ भनेर म दिदीसंग नभनी गएको) होला मैले यता अङ्कुशे भीरको अनुसन्धान गर्न थाले ।
आफै प्रश्न आफै उत्तर हुदै मैले अङ्कुशे भिर मुनि कचहेरि बसाले निष्कर्ष पनि निकाले दोषी अपराधी सबै आफै पत्त लगाए। जंगलमा घाँस पाउन छाडेपछि मान्छेहरु बल्ल त्यहा पुग्दारैछन भन्नेकुरा त चैतको महिना र त्यो दुइ घन्टाको लामो बाटोले सजिलै उत्तर दियो नै। चुरो कुरो थियो त्यो अंकुशको, तेतिबेला तेहा अङ्कुश त् देखिन मैले तर यो बुझियो कि ‘अङ्कुशलाइ रुखमा झुन्ड्याएर तेही अङ्कुश समाती माथि उक्लिनेहोला जवाफ दियो मनले । फेरी अर्कोले तर्क दियो अरे बाफ्रे ! जाबो घाँसको लागि यति जोखिम ? ‘ एउटाले त्यो अङ्कुश मा दृष्टि गाड्यो, वरिपरि नजर डुलायो र भन्यो महिनौसम्म अङ्कुशमा झुन्डिने यी लाखुहरुले भर्याङ्ग चै किन नबनाका त फेरी ? तेत्रो जंगलमा सजिलै बन्छ नि भर्याङ्ग, गम्भीर प्रश्न तेर्साइदियो अर्को छट्टु मनले। अब सचेत मनले उत्तर खोज्न थाल्यो र उत्तर खोताल्यो पनि, ‘ यी गोठाला, घाँसे र बुद्धि नभएर लिस्नु भर्याङ्ग नबनाएका हैनन् तर त्यो बनाउदा अशक्त, असहाय र कम्जोरहरुले पनि अङ्कुशे भिरमा सजिलै गइ त्यो अभावका बेला आफुहरुले लूडाउन पाएको घाँस काटी दिन्छन भनेर पो रैछ त’।
यतिबेला मेरा हजारौ लाखौ साथि (दामाली) बनेका छन्
प्रिय मित्रहरु ! आफुलाई सच्चा कम्युनिष्ट ठान्नुहुन्छ भने अफ्ठ्यारोमा सक्नुहुन्छ कुहिनाले खनेर बाटो बनाउनुस, सक्नुहुन्न लिस्नु बनाइदिनुस त्यो पनि सक्नुहुन्न भने चुपो लाएर माओको बाटोमा हिड्नुस तर मौकापरस्त भएर आफु उक्लिएपछि अङ्कुश लुकाउनुहुन्छ भने तपाइको जिब्रोमा माओत्से तुङ्ग नामको अबमुल्यन हुनेछ किनकि कतै केहि नपाएपछि अन्तिममा तेही अङ्कुशे भीरमा मान्छेहरुले बिकल्प देखेका हुन् । नेपालका सबै कम्युनिष्टहरुको सद्बुद्धि आओस माओ कमरेडलाई सलाम दिदै तपाईहरुलाई शुभकामना !
केहि बर्ष पहिले कृष्ण धाराबासिले लेखेको मदन पुरुस्कार प्राप्त उपन्यास दामिनी भीर भन्दा पहिले म अङ्कुशे भीरसंग परिचित थिए तेसैले यो भिरलाई जेठो माने मैले ।
(२०७५ पुष ११, बुधबार) १४:२९ मा प्रकाशित